यि हुन भाइरल नेपाली बेहुली जसले लकडाउनमा विबाह गरेर आफ्ना पतिलाई बुलेट बाइकको पछाडी राखेर घर लगिन् – List Khabar
Home / रोचक / यि हुन भाइरल नेपाली बेहुली जसले लकडाउनमा विबाह गरेर आफ्ना पतिलाई बुलेट बाइकको पछाडी राखेर घर लगिन्
हुन भाइरल नेपाली बेहुली जसले लकडाउनमा विबाह गरेर आफ्ना पतिलाई बुलेट बाइकको पछाडी राखेर घर लगिन्, यि सु री बेहुलीलाई देखेर सबै छक्क परे, बेहुलालाई बुलेटमा चढाएर घर पुर्याएपछि भनिन् यो त ट्रेलर मात्रै हो ह नि मुन मा देखिन्छ पूरा फिल्म त, भिडियो भाइरल यि अनौठा नेपाली जसले प्रेम विबाह नै गरेर २ पत्नि विबाह गरेर मिलाएर राखेका छन्, जेठीलाई भारतबाट ल्याए र कान्छीलाई बाबुआमाले विबाह गरिदिए, सौता सौता भएर दिदीबहिनीको भन्दा बढी माया देखियो यि दुईटामा, सुत्ने बेलामा जेठीसँग ३ रात र कान्छीसँग ३ रात र १ रात आरामका लागि बिदा लिन्छु भन्दा थामिएन हाँसो हेर्नुहोस् २ पत्निलाई खुशीसाथ राखेका यि जोडीको रमाइलो प्रेम कथा भिडियोमा
ईपीएस करिब १०५ रुपैयाँ भएको जीवन विकास लघुवित्तले आईपीओ निष्काशन गर्दै, कहिलेदेखि दिन सकिन्छ आवेदन? : आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) १०४ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असार ११ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ।
इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतममा १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्काशन बन्द छिटोमा असार १५ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार २५ गते हुनेछ। लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरोशेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ। आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले लघुवित्तलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग त्रिपल बि माइनस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ।
यस्तो रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संस्थाहरु समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम मात्रामा सु्रक्षित र मध्यम क्रेडिट जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। लघुवित्तकाे प्रतिशेयर नेटवर्थ साे अवधिसम्ममा ३०५ रूपैयाँ २७ पैसा रहेकाे छ। सर्वसाधारणले बाँकी १८ लाख ४८ हजार १५ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
लघुवित्तले १९ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो। सर्वसाधारणले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सि आस्बा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
Previous शरीरको यी भागमा कोठी हुने व्यक्तिको विवाहपछि चम्किन्छ भाग्य, तपाईको पनि छ की ?
Next धन प्राप्तिको लागि राशि अनुसार गर्नुहोस् यस्ता सरल उपाय, मालामाल हुनुहुनेछ !